समाचार Archives - Page5of 541 - Online Majdoor
पूर्व सहमति उल्लङ्घन गर्दा गलवन झडप
पेइचिङ, ३ असार । चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) पश्चिम क्षेत्र कमान्डका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्णेल चाङ स्युलीले भारतीय सेनाले चीनलाई दिएको वचन तोडेर गलवन उपत्यकामा दुई देशको सि=माना (लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल) नाघेकोले सोमबारको दुःखद घटना भएको बताउनुभएको छ । उहाँले दुई देशबीच भएको सहमतिमा भारतीय सीमा रक्षा बलको धारणा अस्थिर रहेको र दुवै देशका सैन्य […]
लामो समयसम्म लकडाउनको कारण अस्तव्यस्त र उकुसमुकुस भएको जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनायो । अहिले पनि स्कूल, कलेज, सिनेमा हल, रेष्टुँरा, कुनै पनि सभा सम्मेलन आदिमा लकडाउन यथावत छ । पसल, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग, सरकारी कार्यालय खोलेपछि सहर–बजार तथा गाउँ–ठाउँमा जनताको चहलपहल बढ्यो, उपत्यकाबाट आ–आफ्नो गाउँ–ठाउँ पुगेका नेपालीहरू फेरि काठमाडौँ उपत्यका छिरेका छन् । […]
अब कअब कसिमला पाँय् मोबाइल एपमा
भक्तपुर, ३१ जेठ । भक्तपुरका एक जना इन्जिनियरले भक्तपुरमा परम्परादेखि खेल्दै आएको मौलिक खेल कसिमला पाँय् मोबाइलमा पनि खेल्न सकिने गरी मोबाइल एप बनाएको छ । ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका भक्तपुर वडा नं ९ का रमेश प्रजापतिले बनाएको कसिमला पाँय्को मोबाइल एप शनिबारबाट गुगलको प्लेस्टोरमा पनि उपलब्ध भएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय […]
नेपाली भूमि डुब्ने गरी भारतबाट अर्को तटबन्ध
बुटवल, २९ जेठ । नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बाटोको नाममा अर्को तटबन्ध बनाइरहेको छ । उक्त तटबन्धबाट रूपन्देही जिल्लाको दक्षिण पूर्वी रोहिणी गाउँपालिकाका इमिलिया, बुची बर्मा, बोधबार, विष्णुपुरालगायत गाउँमा रहेको मानव बस्ती विस्थापित हुने देखिएको छ । तटबन्धबाट गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ पूर्णरूपमा प्रभावित हुने स्थानीयहरूको भनाइ छ । नेपाल – भारत सीमा दशगजा […]
कक्षा १० का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विवरण माग्ने
काठमाडौँ, २९ जेठ । गत २०७६ सालका कक्षा १० का विद्यार्थीको सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर, कहिलेसम्म विद्यालयले विवरण एकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने जनाइएको छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षण संस्थाका कार्यालय खुला गर्न दिइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । “तर पठनपाठन गर्न पाइनेछैन” […]
काठमाडौँ, २९ जेठ । सरकारले जारी लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा खुला गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी सेवा, उत्पादन […]
संरा अमेरिकामा आन्तरिक हिंसा र विदेशमा अस्थिरता
हातमा हतकडी कसिसकेका र आत्मसमर्पण गरिसकेका अफ्रिकी–अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको घाँटीमा घुँडाले थिचेर प्रहरीबाट हत्या भयो । यो घटनाले मानिसहरूलाई सन् २०१६ मा संरा अमेरिकाको राष्ट्रिय फूटबल लिगका खेलाडीहरूको विरोध प्रदर्शन सम्झाएको छ । त्यतिबेला संरा अमेरिकी राष्ट्रिय गान बज्दै गर्दा कोलिन कैपरनिकले घुँडा टेक्नुलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय गानको अपमान भनेका थिए । गत मे २५ मा भएको […]
मन्त्रीहरूलाई सांसद सुवालको प्रतिप्रश्न
प्रतिनिधिसभाको जेठ २६ गतेको बैठकमा १३ वटा मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभयो । सत्तापक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्रीहरूसँग प्रतिप्रश्न नगर्न ह्विप लगाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले पनि प्रत्येक मन्त्रीसँग एक दुईजना सांसदलाई मात्र प्रतिप्रश्न सोध्न दिएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले १३ जना मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद सुवालको […]